Horudhac: Leicester City vs Liverpool… (Labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Premier League oo isku wajahaya caawa garoonka King Power) – Gool FM
Horudhac: Leicester City vs Liverpool… (Labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Premier League oo isku wajahaya caawa garoonka King Power)
Haaruun December 26, 2019
(Leicester) 21 Dis 2019. Labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Premier League ayaa kulankooda Boxing Day waxa ay wada ciyaarayaan caawa.
Leicester City ayaa kooxda ugu fiican adduunka ee Liverpool taasoo hanatay koobka kooxaha Adduunka sanadkan waxa ay ku soo dhoweynayaan garoonka King Power.
Kooxda Foxes lagu naanayso ayaa iska lumisay fursad ay ku soo yareyn kartay farqiga dhibcaha u dhexeeya iyaga iyo kooxda soo booqanaysa intii lagu guda jiray waqtigii ay Koobka kooxaha Adduunka ciyaareysay Liverpool, waxaana weli Reds ay ka sarreysaa 10-dhibcood oo nadiif ah, iyadoo kulanna u harsan yahay.
Taariikhda: Khamiis, 26 Dis 2019
Garsooraha: Michael Oliver (England)
Leicester ayaa qiimeyn doonta xiddiga garabka uga ciyaara ee Harvey Barnes, kaasoo la dhibtoonaya dhaawac canqowga ah oo ka soo gaaray kulankii ay wajaheen kooxda Manchester City.
Laacibka khadka dhexe ee Matty James kaasoo aan ciyaarin tan iyo bishii Janaayo sababo la xiriira dhaawac muruqa dambe ee lugta uu ka qabay ayaa dib ugu soo laabtay tababarka, laakiin weli diyaar uma ahan inuu kulan ciyaaro.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain ayaa seegaya kulankan kaddib markii dhaawac canqowga ka soo gaaray looga dhexqaaday garoonka kulankii Final-ka ee Koobka kooxaha Adduunka.
Fabinho, Dejan Lovren iyo Joel Matip ayaa dhammaantood kulankan aan u ciyaari doonin Reds oo sii wadan doona maqnaanshahooda.
>- Leicester ayaa khasaaro la kulantay afar ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay la ciyaartay Liverpool kulanka kalane waxa ay ka qaateen barbaro, tan iyo guushii 3-1 ee bishii Febraayo sanadkii 2017-kii.
>- Liverpool ayaa guuleysatay labadeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay booqatay Leicester, weligoodna ma guuleysay saddex kulan oo xiriir ah oo ay booqdeen iyaga kulammada sare ee horyaalka Taariikhda.
>- Labada kooxood ayaa mid waliba shabaqa soo taabtay mid kasta oo ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeeyey Premier League ee dhexmaray Leicester iyo Liverpool, 20-kii kulan ee markaas ka hor ku dhexmaray labadaan kooxood tartankan ayaa labaduba waxa ay gool dhaliyeen kaliya siddeed kulan.
>- Leicester iyo Liverpool ayaa ciyaaray kulan Boxing Day ah xilli ciyaareedkii ay Foxes ku guuleysatay horyaalka ee 2015-16, Reds ayaana 1-0 ku adkaatay kulankii ka dhacay garoonka Anfield, waxayna ahayd mid ka mid ah saddex guuldarro oo Leicester ka soo gaartay horyaalka xilli ciyaareedkaas.
>- Liverpool ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay Boxing Day kulammada Premier League, waxaana ay cel-celis ahaan dhaliyeen 11-0, waligoodna kuma aysan guuleysan shan kulan oo isku xigta taariikhdooda horyaalka kulammada Boxing Day.
>- Liverpool ayaa guuleysatay 29 kulan horyaalka Premier League sanadkan 2019, kaliya hal jeer ayay taariikhdooda Reds guuleysatay kulamo badan horyaalka ah hal sano gudihiis waana sanadkii 1982-kii oo ay adkaadeen 33 kulan.
>- Waxa ay ciyaareysaa Liverpool iyadoo 10-dhibcood oo nadiif ah ku haya horyaalka Premier League, taariikhda kulammada sare ee horyaalka, kaliya hal koox ayaa 10 dhibcood oo nadiif ah ama ka badan iyadoo ku haysay horyaalka maalinta ciidda gaalada ee Christmas-ka haddana aan ku guuleysan horyaalka, waana Newcastle xilli ciyaareedkii 1995-96.
>- Leicester ayaa laga badiyey kulamadeedii ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waxaana laga dhaliyey goolal badan kulankii ay khasarada 1-3 kala kulmeen Man City, waana intii laga dhaliyey siddeedii kulan ee markaas ka hor ay ciyaareen horyaalka, The Foxes ayaan guuldarro la kulmin kulammo xiriir ah horyaalka tan iyo saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ka hoos ciyareen tababare Claude Puel bishii Febraayo.
>- Taariikhda Premier League kaliya Andy Cole (11) iyo Thierry Henry (8) ayaa dhaliyey goolasha ugu badan Premier League iyagoo ka horjeeda Liverpool waana in ka badan inata uu ka dhaliyey ciyaaryahanka Leicester ee Jamie Vardy oo ah 7 gool, xaqiiqdii Vardy ayaa gool dhaliyey mid kasta oo ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo uu garoonka kooxdiisa kula ciyaaray Liverpool tartammada oo dhan waxaana uu ka dhaliyey 5 gool.
>- Weeraryahanka Liverpool ee Sadio Mane ayaa gacan ka geystay 10 gool sagaalkiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ku soo bilowday safka hore tartammada oo dhan 4 gool waa uu dhaliyey 6 kalena waa uu caawiyey, Mané ayaa noqon kara ciyaaryahankii labaad ee kooxda Liverpool kaasoo gool caawin sameeya shan kulan oo xiriir ah tan iyo markii uu bilowday sanadka 2019, kaddib Trent Alexander-Arnold oo lix caawin sameeyey intii u dhaxaysay bilihii April iyo May.
Horudhac: Manchester United vs Newcastle United… (Kooxda Red Devils oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato)
(Ma nihin koox kubadda cagta ah!)…Halyeey Man United ah oo weerar culus ku qaaday maamulka kooxda